ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “ကံမကောင်း အကြောင်းမလှခဲ့လျှင်”
Merry Christmas Ko Paw,
Thanking you for information and link.
ဒါပေမဲ့ မလေးနဲ့ အင်ဒီယန်းတွေမှာ အတွေ့ရနည်းတယ် ဆိုတာတော့ စိတ်ဝင်စားမိတယ်။ သူတို့မှာ family life ပိုရှိလို့ဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ တယောက်နဲ့ တယောက် ပိုပြီး ချည်နှောင်မှု ရှိလို့လား။
စိတ်မကောင်းစရာတွေ ဒီရက်ပိုင်း မကြည့်ချင်လို့ပါ။
ကံဆိုတာ မိမိကိုယ်တိုင်က ပြုလုပ်တာမို့ လူတိုင်း ပစ္စုပ္ပန်မှာ ကောင်းသောအလုပ်တွေလုပ်ပြီး အနာဂတ်မှာ ကံကောင်းနိုင်ကြပါစေလို့ပဲ ဆုတောင်းပါတယ်။
ပျော်ရွှင်စရာ ခရစ်စမတ် ဖြစ်ပါစေရှင် ... ။
့ကျနော့် စိတ်အထင်ပြောရရင်တော့ တရုတ်တွေတော်တော်များများ အအားမနေချင်ကြတာရှိတယ်။ အသက်ကြီးလဲ တတ်နိုင်သလောက်လုပ်လေ့ရှိတယ်။ ကိုပေါပြောတော့ သူတို့နိုင်ငံသားတွေဆို..
သူတို့နိုင်ငံသားအသက်၆၀ကျော် တွေရဲ့ ဘယ်နှစ်ရာခိုင်နှုန်း အဲ့လို လမ်းပေါ်မှာ ရှာစားနေရတာလဲခင်ဗျား။
အဲ့ဒီလို ဘ၀ရောက်နေသူတွေရဲ့ ငယ်စဉ်ဘ၀တွေကရော ဘယ်လိုဖြတ်သန်းခဲ့သလဲသေချာမသိနိုင်တော့
ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ တချို့စနစ်သိပ်ကောင်းတဲ့ တိုင်းပြည်တွေမှာလဲ လူကြီးတွေလမ်းပေါ်ရောက်တာရှိတယ်။ ငယ်စဉ်က ဖြစ်သလိုနေ ဖြစ်သလိုစား ပြီး ဘ၀ကို ရေစုံမျှောခဲ့သူတွေပေါ့။ လူတိုင်းတော့ ဟုတ်မယ်မထင်ပါဘူး။ တော်ယုံ ပုံမှန်ကြိုးစားခဲ့တဲ့ သူတွေဆိုရင်တောင် ပြည့်ပြည့်စုံစုံ မဟုတ်သည့်တိုင်
NC16 လို့ သတ်မှတ်တာ အသက် 16 နှစ် ပြည့်ပြီးသူဆိုရင် brainwash လုပ်ထားတာ စိတ်ချလို့ရတဲ့ အခြေအနေမှာ ရှိတယ်ဆိုပြီး ယူဆလို့ ထင်တယ်။
စင်္ကာပူမှာ အပြီးနေမယ်ဆို ဂစ်တာလေး ဘာလေး တီးတတ်ရင် မဆိုးဘူးပဲ..
ကြုံလို့အရင်၂လလောက်က ကျနော့် အိမ်နီးနားချင်းတစ်ယောက် စလုံးခံပြီးမှ retrench အလုပ်ခံရလို့အသက်က ၅၀ ကျော်ပြီဆိုတော့ ဘာအလုပ်ကမှလဲလက်မခံ.. မိန်းမကလဲဘာမှမလုပ်တတ်.. ကလေးတွေကလဲငယ်သေး.. ဗမာပြည်လဲ ပြန်လို့ မရနဲ့ 
ကျနော် ကဗျာဆရာ အောင်ဝေး
သားဦး အရူး တဲ့
တို့ ဘုရား မယားဖက် ခပ်ပါပါ တဲ့
ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ သားကြီး ဦးအောင်ဆန်းဦး
အမေရိကန် မရိမ်းတပ်တွေနဲ့ 
မြန်မာပြည်ကို ချီတက်လာပြီ …
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် … တဲ့
အစ်ကိုကြီး ဦးအောင်ဆန်းဦးခင်ဗျာ …
ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့သားမို့ချစ်နေဆဲပါ။
အောင်ဆန်းဦး … လို့တော့
ကို ကို ဆို တဲ့ ငပေါက ဘာမဆိုင်ညာမဆိုင် အာဇာနီ ဘလော့က ကိုအောင်ဝေး ကဗျာကိုလာပြီး ကွန်မန့် မှာ ကော်ပီပေ့ လုပ်ထားတာပါလိပ်
Chinese has more than 75% of total population. Maybe that's the reason I guess. I met some old folks before. They have money and house. But they can't stop working.
IC ပန်းရောင်ပြောင်းဖို့စဉ်းစားနေသူတွေ ကြည့်သင့်ပါတယ်။ ဒီ link ကိုတင်ပေးတဲ့ ကိုပေါကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
dar so... bae ic ko change ya ma lae?
rita.. u don't see malay and indian coz normally they r the poorest in sg but they don't work no matter how poor they r..
they may die of hunger.. but won't work..
It is dark side of Singapore. That kind of dark side can be seen not only in Singapore, but also in US, UK, Japan etc, all over the world. It is an pessimistic outlook.If you look at from optimistic out look, life will be better.
Martyn took this video at Chinatown, Outram and Geylang that's the reason why we are seeing most of the chinese folks. If he ever go the Geylang Serai we will see more of Malay or Indian folks. But honestly everywhere same prob not only Singapore!
ကမ္ဘာကိုဦးဆောင်နေတဲ့ နိုင်ငံကြီးတွေမှာတောင် ဒါမျိုးတွေ ရှိသေးတာပဲ..ဘာတွေဆန်းနေလို့လဲ.. ပိုက်ဆံမချမ်းသာတာ ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာ ကိုယ်ပိုင် ကြိူးစားမှု ကံ ညာဏ် ဝိရိယနဲ့လည်း အများကြီးဆိုင်တယ်... တစုံတယောက် အဖွဲ့စည်းတခုခုက အခွင့်ရေးတွေပိတ်ဆို့ ခေါင်းပုံဖြတ် အခွင့်ရေးတွေပျောက်နေတယ်ဆိုတာတွေဆိုရင်တမျိုး...
ဒါမှမဟုတ်လဲ လီကွန်ယူ ဖြစ်ဖြစ် သူ့သားကိုဖြစ်ဖြစ်သတ်ပြီး စင်ကာပူသမတ လုပ်ပါတော့လား...
i felt relief that many of us have right judgment on world view... unlike nga paw who only believe in utopia... :D
nga paw.. learn from them...